Ukwandisa abantu abakhubazekileyo (abawaziwa ngokuba yi-Multiply Handicapped and sometimes referred to as children with different variments) bafumana ukukhubazeka okubandakanya umba wokukhathazeka kunye nomcimbi ongokwenyama . Ukubonakaliswa okuqhelekileyo kwe-MD kukudibanisa ukukhubazeka kwengqondo ngeemoto ezinzima okanye ukukhawulelwa ngokomzimba. I-cerebral palsy yimeko ebonakala kubantwana abancinci kwaye ingabandakanya ukuxhalabisa, ubuthakathaka besiphako, ukulungelelanisa kakubi, ukunyanzelisa, kunye neengxaki zolwimi .
I-CP yindlela eqhelekileyo yokukhubazeka ezininzi.
Ngokomntu wase-United States UMthetho wezeMfundo okhubazekileyo (IDEA), inkcazo yomthetho yokukhubazeka ngamaninzi "... ukudibanisa okufanayo) (njengokukhubazeka kwengqondo-ukungaboni, ukukhubazeka kwengqondo-ukukhubazeka kwamathambo, njl), ukudibanisa okubangela iimfuno ezinzulu zemfundo ukuba abanako ukuhlala kwiprogram ekhethekileyo yemfundo kuphela enye yezinto ezingenzi kakuhle. (Isilumko-ukuphofwa kuthathwa njengemeko ekhethekileyo phantsi komthetho we-federal kunye nencazelo yayo ye-IDEA.)
Aba bafundi bangaba nobunzima bokufikelela nokukhumbula izakhono kunye nokudlulisa ezo zakhono kwimeko enye. Bahlala befuna inkxaso ngaphandle kwendawo yokufundela. Izinketho zemfundo zala bantwana zisekelwe kwiimpawu abazibonisayo.
Ziziphi Izizathu Zokukhubazeka Kwabaninzi?
Iingcambu ze-MD zininzi kwaye zininzi.
Ukukhubazeka kwe-cerebral kubangelwa umonakalo ekukhuleni kwengqondo. Ezinye iimeko zingabangelwa yi-chromosomal engafanelekanga, ubunzima obunxulumene nobunzima bokuzalwa ngaphambi kokuzalwa. I-Fetal Alcohol Syndrome ingaba yimbangela. Izifo, ukulimala, kunye neengxaki zemizimba zingabangela ukuba zibe yi-MD.
Ngokuqhelekileyo akukho sizathu esaziwayo sokukhubazeka kwabantwana abaninzi.
Izinketho zeMfundo kubafundi be-MD
Uninzi lwabantwana abanokukhubazeka ezininzi luya kufuna udinga oluncedisayo kwinkxaso yabo ebomini babo, kuxhomekeke kwizikhubazo ezichaphazelekayo. Ukukhubazeka okukhuselekileyo kunokufuna kuphela inkxaso ngenkqubela imisebenzi ethile. Abantwana abanokukhubazeka kakhudlwana baya kufuna uncedo oluqhubekayo. E-US, i-IDEA inikezela ngamathuba emfundo kubafundi kungakhathaliseki ubunzima bokukhubazeka kwabo. Abantwana abangaphezu kwezigidi ezingama-6 baseMelika bafumana uhlobo oluthile lwenkonzo ekhethekileyo yemfundo .
Ngokuxhomekeke kwizikhuba ezibandakanyekayo, umntwana onomdla we-MD unokufakwa kwisilungiselelo esifanelekileyo , oko kuthetha ukuba uhlala ecaleni ngakumbi ekukhuliseni abantwana. Unokufumana inkxaso eyongeziweyo evela kubaqeqeshi kulo lonke usuku, kwi- push-in okanye yokukhupha imodeli yesevisi . Abantwana abakhubazekileyo okanye abaphazamisayo bangafuna ukufakwa kwisikolo esikhethekileyo.
Fumana ulwazi oluthe xaxa malunga namandla namandla omfundi, izinto ezithandekayo kunye nezinto ezithandayo. Ezi zingasetyenziselwa ukukhuthaza umfundi nokucebisa imfundo yabo .
Qwayelana nomfundi we- IEP .
Uncedisa ootitshala, nabo: i-IEP yomfundi inokuvumela ukuba inkxaso yabasebenzi besikolo kunye.
Cinga indlela iteknoloji yokuncedisa inokuba luncedo ngayo eklasini.
Iinkonzo ezinxulumene neenkonzo ezixhasayo kwiklasi lakho.
Khuthaza ukuzimela. Cinga ngemisebenzi kunye nemisebenzi eyenziwa ngumfundi we-MD eklasini.
Ngokucwangcisa kunye nenkxaso efanelekileyo, umntwana onokukhubazeka ezininzi unokufumana amava emfundo avuzayo.
I-Skred Thinking Skills (i-HOTS) kwiMfundo
I-Dhanteras - Umthendeleko Wezobutyebi